Isazi sithi kunobudlelwano phakathi kokuzamazama komhlaba nokuqhuma kwentaba-mlilo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngemuva kokuzamazama komhlaba kwangenyanga edlule nokuqhuma kwentaba-mlilo iPopocatépetl eMexico, abantu abaningi bazibuza ukuthi ngabe ubudlelwane phakathi kwalaba ababili. Ochwepheshe ngaleso sikhathi bayakuphika. Esinye sezizathu eziyinhloko kwakuyibanga elalikhona phakathi kwendawo ezamazama komhlaba nentaba-mlilo uqobo lwayo. Amakhulu amakhilomitha ukuthi i-priori, kubonakala ngathi ayikhombisi ubudlelwano, ngakho yenqatshwa. Ngaphandle kwalokhu, usenelukuluku lokwazi, futhi manje isazi esisha sikhuluma ngokuthi kungenzeka ukuthi kunjalo.
Sixoxa UCarlos Demetrio Escobar, isazi sezintaba zaseSalvador esiphikisana nale mbono yangaphambilini. Ngokuya ngokubona kwabo, inani elikhulu lamandla elenziwa ukuzamazama komhlaba liyabonakala. Ukucabangela lokhu kuzamazama komhlaba okunamandla, kungadala nentaba-mlilo esebenzayo ukuthola amandla amaningi. Akagcinanga lapho, waveza nokuthi ukuzamazama komhlaba okusondelene nentaba yezintaba-mlilo kungaba yinkomba yomsebenzi wentaba-mlilo esebenzayo.
Izintaba-mlilo nokuzamazama komhlaba, ubudlelwano bazo
Ukuqhuma kwentabamlilo kuyingxenye yomphumela wokwanda kwamazinga okushisa ku-magma. IMagma, etholakala ngaphakathi kwengubo yoMhlaba, ingafudunyezwa ukuzamazama komhlaba. UCarlos Demetrio, uchaza ukuthi lokhu kungaba ngesinye sezimbangela zalokho kungadala ukuqhuma ngemuva kokundindizela. Umgodi womlingo, indawo lapho idwala elincibilikisiwe elivela entabamlilo esebenzayo kungathatha amandla amaningi. Lokhu kuzohumushela ekucindezelekeni okuphezulu, okuthi ekugcineni kuvuse amathuba aphezulu okuqhuma.
Ngokusho kochwepheshe, intabamlilo esebenzayo yileyo esingayibheka njengamandla adingekayo okuveza ukuqhuma, noma lokho okwenze ngaphambili okungenani eminyakeni engama-500 edlule. Lokho empeleni kungakhuphula inani "lezintaba-mlilo ezisebenzayo."
U-Escobar, lokho ayefuna ukukucacisa ngaso sonke isikhathi ukuthi azilandisi ukuzamazama komhlaba nezintaba-mlilo, kuyashesha kakhulu. Ngaphezu kwakho konke, kucatshangelwa ukuthi i- "morphology" yabo bobabili ifana kakhulu. Omunye angondla noma avuse omunye.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Uchwepheshe uthi kunobudlelwano phakathi kokuzamazama komhlaba nokuqhuma kwentaba-mlilo